XOG + DHAGEYSO: Taliyihii watay ciidamadii weeraray caawa xarunta Barlamaanka Puntland oo ka hadlay khasaarihii & wixii dhacay. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG + DHAGEYSO: Taliyihii watay ciidamadii weeraray caawa xarunta Barlamaanka Puntland oo...
Garoowe (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin cusub ka soo baxaysa israsaaseyntii caawa ka dhacay xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe, waxaana ka hadlay mid ka mid ah taliyihii watay ciidamadii weeraray halkaasi.
Taliyaha qeybta booliska ee gobolka Nugaa, Korneel Muumin Cabdi Shire oo caawa la hadlay warbaahinta Garoowe, ayaa tibaaxay, in ay u tageen xarunta baarlamaanka, sida uu afkiisa ku qiray, balse ma uusan sheegin ujeedka xaruntaasi u tageen caawa.
Wuxuu xusay, taliyuhu in weerarka ay billaabeen ciidamada ilaalada ka ahaa xarunta baarlamaanka, mana uusan sheegin faah-faahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa dhaliyay israsaaseyntaasi khasaaraha dhalisay.
Korneel Muumin Cabdi Shire ayaa ugu yeeray ciidamada Ilaalada xarunta Baarlamaanka in ay yihiin maleeshiyaad la garan waayay, taas oo muujinaysa ficilada ka dambeeyey dagaalkii caawa ka dhacay halkaasi.
Wuxuu ugu dambeyn sheegay, in khasaare dhimasho iyo dhaawacba uu dhankooda soo gaaray, balse aanu ogeyn khasaaraha gaaray dhanka kale.
Haddaba halka hoose ka dhageyso wareysiga taliye Muumin Cabdi Shire:
Khasaaraha ka dhashay
taliye Muumin Cabdi Shire
weerarkii xarunta baarlamaanka Puntland